Golaha wasiirada Federaalka iyo xildhibaano ka cabanaya baad iyo handadaad – Radio Daljir
Dhawaan ayaa waxaa soo ifbaxay cabasho ay jeedinayaan xubno ka tirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ka cabanaya cadaadis uu ku hayo mudane kale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Xubnahan golaha wasiirada ka tirsan oo gaaraya 6 qof oo isugu jiro wasiiro iyo wasiir ku xigeeno ayaa sheegay in uu dhibaato iyo faragelin joogto ah ku hayo guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo ay sheegeen in uu si toos ah ama di dadban u handadayo.
Cabdiweli Muudey ayaa xubnahan ku cadaadinaya in dad isaga ka socdo ay u shaqaaleysiiyaan oo ay u qoraan mushaar fiican balse marka ay wasiirada ku adkaato in ay shaqaaleysiiyaan ayaa durbadiida waxaa soo faad saareyso handadaad kaga imaaneyso Xildhiban Cabdiweli Muudey isaga oo ku caanbaxay “In aad warkeyga yeesho wadiiday soo ma aha, anigaa shaqadaada aqaano” taasoo loo fasirtay in Cabdiweli Muudey uu ka shaqeyni doono in wasiirka ama wasiir ku xigeenka xilka laga qaado.
Wasiir ku xigeen ka tirsan xukuumada ayaa sidoo kale sheegay in Cabdiweli Muudey si toos ah ugu sheegay in waqtiga uu golaha wasiirada kusii jiri doono ay tahay muddo kooban oo aad u yar, uuna ku howlan yahay sidii uu xilka uga xayuubin lahaa.
Sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo quud dareynayo in ay golaha wasiirada kusoo biiraan ayaa Xildhibaan Cabdiweli Muudey ka codsaday in uu kala shaqeeyo sidii ugu dhigi lahaa wasiiro ama wasiir ku xigeeno. Balse xildhibaanada ayaa la yaabay markii uu Cabdiweli Muudey ku dhahay lacag dhiiba si aad golaha wasiirada uga mid noqotaan.
“Weligey ma maqlin mana arkin Cabdweili Muudey ka hor xildhibaan dhahaya xildhibaan kale lacag bixi oo aniga isii si aad xubin ugu noqoto golaha wasiirada” ayuu yiri xildhibaan uu Cabdiweli Muudey ku xujeeyay in uu lacag bixiyo si uu ugu mid noqdo golaha wasiirada. Xildhibaankan ayaa ka baqaya haddii uu magaciisa sheego in Cabdiweli Muudey ka hor istaago dadaalka uu ugu jiro in mar un ii xubin ka noqdo golaha wasiirada.
Arrintaan ayaa noqotay arrin aad usoo shaacbaxday bilihii ugu dambeeyay ayadoo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ay garan la’yihiin sidii ay u maareyn lahaayeen dalabaadka ka imaanaya Cabdweli Muudey ee ku dhisan handadaada iyo baadka.
Muxuu ka baran karaa maamulka cusub ee Bosaaso caqabadihii soo maray maamulkii hore? (dhegayso)